nRerate Akawedzera Mapeji Ekushanya ne9.6%. | Martech Zone
China, November 17, 2011 China, November 17, 2011 Douglas Karr
Isu takave nekukura kukuru pa Martech Zone mwedzi mishoma yapfuura. Vaya vanhu vakatibvunza kuti ndeapi matanho uye havasati vambove. Kwave kuri basa rekushanda nesimba, zvichiita kuti zvemukati medu zvive zvakakosha zuva rega rega. Isu takanyora zvirinani, zvakanyorwa kakawanda, zvakagovaniswa pamhando dzakasiyana dzemisoro, uye takasimudzira zvirimo zvakanyanya zvinobudirira - kunyanya kuburikidza nehukama hwemagariro.
Muchokwadi, tsvagurudzo yakatongedzerwa seye # 1 sosi yeiyi saiti kusvika mwedzi mishoma yapfuura. Ini ndaipedza maawa nemaawa ndichigadzirisa saiti uye nekuisimudzira kuti ndiwane mashoma masendimita. Pane imwe nguva ini ndashandisa iyo imwecheteyo kuedza ku zvakagadziriswa zvemukati nekusimudzira munharaunda, iwo ma inchi akashanduka kuita mayadhi. Mbudzi uchave mwedzi wedu wakanakisa zvachose… uye isu tichapfuura vanopfuura zviuru zana kushanya!
Imwe tweak yatakaita iyo yakabatsira kutema yedu yekare zvine hukama zvemukati plugin itsva kubva NRelate. nRelate haina kuvimba neWordPress 'yekutsvaga algorithms - ivo vanokambaira yako saiti uye vanonongedza zvemukati ivo pachavo. Uye ivo vanoratidza zvirimo mune yakanaka muunganidzwa wemifananidzo pane iyo peji.
Ndanga ndichiomerera nevashoma vevatengi vedu kuti kusanganisira mifananidzo muzvinyorwa zvavo kunowedzera iko-peji kubatanidzwa. Iyi plugin inoratidza chiratidzo changu. Mapeji pavakashanyira akakwira 9.6% kubvira pawakaisa iyo plugin. Ichokwadi kuti yavo inogona kunge iri zvimwe zvinhu zvinosanganisirwa, asi ini handina chivimbo chekuti chero mamwe maitiro atakatumira aive akatarisana nekuwedzera huwandu hwemapeji akashanyirwa.
Vakanaka chaizvo vanhu ... vanhu vanokwezva kumifananidzo, kwete mameseji!
Iko Kukosha uye ROI kubva kuConferensi
Nov 18, 2011 pa10: 36AM
Ini ndinofanira zvakare kuwedzera kuti nguva yedu pane saiti yakakwira inenge yakaenzana chiyero!